बलिउडका यी कलाकारले गरे आत्महत्या, भेटिएन सुसाइड नोट, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बलिउडका यी कलाकारले गरे आत्महत्या, भेटिएन सुसाइड नोट
एजेन्सी । बलिउड कलाकार रविशंकर आलोकले घरको छतबाट हामफारेर आत्महत्या गरेका छन्।
चलचित्र अब तक छप्पनका सहायक निर्देशक समेत रहेका चलचित्रका स्क्रिप्ट राइटर आलोकले बुधबार घरको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन्। रविशंकरले एक वर्षदेखि कुनै काम गर्न सकेका थिएनन्। उनी भाँडाको घरमा बस्दै आएका थिए। रविशंकर डिप्रेशनमा रहेको उनका भाइले बताएका छन्।
आत्महत्या गरेका रविशंकरसँग कुनै सुसाइड नोट फेला नपरेको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। चलचित्र अब तक छप्पन सन् २००४ मा प्रदर्शन भएको थियो। यो चलचित्रमा रवीशंकरले निर्देशक शिमित अमिनसँग मिलेर सहायक निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। चलचित्रले निकै चर्चा कमाएको थियो।